‘हिरोइन खोज्दै थिएँ, झरना पो भेट्टाए’ - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७६ जेठ २९ गते २:५२ मा प्रकाशित
सुनिलकुमार थापा हिरोइन खोज्दै थिए, झरना थापालाई भेट्टाए तर फिल्ममा लिएनन् । आफ्नै घर लिएर गए । २२ वर्ष भइसक्यो यो जोडी एक भएको । यी दुईको सहकार्य लोभलाग्दो छ । यस जोडीलाई देखेर फिल्म क्षेत्रमा टिप्पणी पनि हुने गर्छ, ‘जोडी होस् त यिनीहरुको जस्तो ।’ नयाँ बानेश्वरस्थित आफ्नै निवासमा यी दुईले नागरिक परिवारसँग आफ्नो जोडीबारे खुलेर कुरा गरे :
झरनाको खास घर दाङ हो । एसएसलीसम्म त उनलाई उनको ममीले नाच्न पनि दिनुहुन्न थियोे । राजधानी आएपछि उनले ममीलाई थाहै नदिई आर्ट्सअन्तर्गत डान्स विषय रोजिन् । यता सुनिलले पनि बिहे गर्नुअघि झरनालाई फिल्म खेल्न नदिने सर्त राखेका थिए तर बिहेपछि उनैको सहयोगले झरना हिरोइन भइन्– त्यो पनि व्यस्त हिरोइन । ‘त्यतिबेला म रेस्टुराँको व्यवसाय गर्थें, फिल्म त हेर्दैहेर्दिन थिएँ,’ सुनिलले भने, ‘साथी उज्ज्वलको संगतले फिल्म बनाउने मुडमा पुग्दा झरनासँग भेट भएको थियो । झरनाले मसँग भेट हुनुअघि नै दयाराम दाहालको ‘दाइजो’ फिल्ममा सानो रोल गरिसकेकी रहिछन् । बीचमा सुटिङ ब्रेक भएको रहेछ । पछि दयारामजी रोकिएको सुटिङ सुरु गर्न घरमै कुरा गर्न आउनुभयो । मैले झरनाको कारण फिल्म किन स्टप हुन दिने भनेर हुन्छ भनिदिएँ ।’
‘मलाई उहाँले सधैँ राम्रो फिल्म गर्न सुझाव दिइरहनुभयो । तैँले छोटो लुगा किन लगाएको ? सुटिङबाट राति किन ढिलो आएको भनेर कहिल्यै गाली गर्नुभएन । मैले पनि उहाँलाई आफ्नो कामबाट निरुत्साहित नहुन सधैँ हौसला दिइरहेँ । श्रीमान–श्रीमतीमा यति भएपछि अरु के चाहियो ?’
सुनिलले पुरानो रोकिएको फिल्ममा काम गर्न स्वीकृति दिए पनि झरनालाई निरन्तर फिल्म गराउनेबारे सोचेका थिएनन् तर उनी तयार भए । नभन्दै झरनाले नाचेको ‘मलाई नेपाली माया चाहिन्छ’ गीत असाध्यै हिट भयो । त्यसपछि सुनिलले आफ्नो अर्को फिल्म ‘गोर्खाली’मा झरनालाई एकल हिरोइनका रुपमा डेब्यु गराए । त्यो पनि सुपरहिट । ‘त्यसपछि त उसले मार्केटमा हिरोइनको छाप छोडिहाल्यो नि,’ सुनिलले भने, ‘घरबाहिरको फिल्मचाहिँ नखेल्ने भन्ने कुरा थियो तर साथी उज्ज्वलले ‘जीवनसाथी’का लागि प्रस्ताव गर्यो । ओके गरियो । त्यो पनि हिट भयो ।’ त्यसपछि रिलिज भएका झरनाका ‘ए मेरो हजुर’, ‘हामी तीन भाइ’, ‘सुखदुःख’, ‘मुग्लान’ लगायत थुप्रै फिल्म लगातार हिट भए । फिल्म इन्डस्ट्री झरनाले लोकप्रिय हिरोइनको छाप बनाइन् भने सुनिलले सफल निर्माताको । दुवैको सहकार्य अहिलेसम्म जारी छ । सुनिलकै पहलमा झरना अहिले अभिनेत्रीबाट निर्देशक बनेकी छन् । सुनिलको निर्माण र झरनाको निर्देशनमा तयार भएको ‘ए मेरो हजुर २’ अहिले प्रदर्शनको क्रममा छ । ‘केही वर्षअघिसम्म साथीहरु मलाई तेरी बूढी अरुसँग नाचेको देख्दा ईष्र्या लाग्दैन भन्दै जिस्काउँथे,’ सुनिल भन्छन्, ‘म उनीहरुलाई फिल्म बन्ने प्रक्रियाबारे सम्झाउँथे । खासमा झरना र मेरो यहाँसम्मको यात्रा सहकार्य भएरै आइपुगेको हो ।’ सुनिलले यसो भनिरहँदा झरनाले उनको कुरामा सहमति जनाउँदै थपिन्, ‘मलाई उहाँले सधैँ राम्रो फिल्म गर्न सुझाव दिइरहनुभयो । तैँले छोटो लुगा किन लगाएको ? सुटिङबाट राति किन ढिलो आएको भनेर कहिल्यै गाली गर्नुभएन । मैले पनि उहाँलाई आफ्नो कामबाट निरुत्साहित नहुन सधैँ हौसला दिइरहेँ । श्रीमान–श्रीमतीमा यति भएपछि अरु के चाहियो ?’
तस्विर : रुकेश श्रेष्ठ